Nkwakọ RPM Nkebi 1: isi | Site na Linux
Nkwakọ RPM Nkebi 1: isi
Isiokwu a ga-enyere gị aka ịghọta isi echiche na Nkwakọ RPM na olee otumo guzobere gburugburu nchịkọta ụlọ.
Ndi nkesa ndi Debian na-abawanye taa, jiri usoro ngwugwu ha .deb maara nke ọma. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị sistemụ nkwakọ ngwaahịa dị. N'ezie, LSB kwuru na nkesa ọ bụla onye choro iru ochichi ga-akwado ngwugwu RPM. Ka anyị hụ otu esi emepụta otu.
Anyị ga-eji Fedora mee ihe ndị a ntuziaka gị wiki.
Kwadebe gburugburu ebe obibi
A na-atụ aro ya mepụta onye ọrụ kpọmkwem iji mepụta nchịkọtaYa mere anyi adighi emebi nke anyi o bula. Anyị chọkwara nchịkọta nhọrọ:
sudo yum wụnye @ mmepe-ngwaọrụ @ fedora-packager
Ihe anyi choro di njikere. Ugbu a, anyị ga-emepụta gburugburu ụlọ ngwugwu:
Ugbu a, anyị nwere folda ~ / rpmbuild, nke enwere ụfọdụ folda ndị ọzọ:
KWU: Nke a bụ ebe a ga-ewu ngwugwu ahụ.
BUILDROOT: Ngwunye nwụnye na-ewere ebe a. A ga-ede faịlụ ndị a ga-arụnyere mgbe onye ọrụ ikpeazụ mechara wụnye ngwugwu ahụ.
RPMS: Ozugbo ewuru ya, a ga-etinye faịlụ RPM ọnụọgụ abụọ (.rpm) ebe a, dị njikere ịwụnye.
SRPMS: Ọ bụrụ na anyị egosi, a ga-etinye isi iyi RPM faịlụ (.src.rpm) ebe a, dị mma maka ịmegharị ngwugwu ngwugwu ma ọ bụ nke emelitere.
AHURTA: N'ebe a, ị ga-etinye isi mmalite (.tar.gz, na-ejikarị) na ihe eji eme ihe.
IHE: Nkọwapụta faịlụ (.spec) na-etinye ebe a.
Site na nke a anyị nwerela nkwadobe gburugburu. N'isiokwu na-esonụ, anyị ga-amụta otu esi aghọta faịlụ ndị ahụ dị iche spec.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Nkwakọ RPM Nkebi 1: isi
Mee ka uzu oku ahu di ala.
Enwere distros na-ezere ihe niile ị na-ekwu (Mageia, Open Xange, Kororaa ...)
Ka anyi hu ma anyi nyocha obere obere tupu anyi emeghe onu anyi
Rrrr Nwachukwu dijo
Nsogbu a na-eduzi na ngwugwu RPM bụ na distro ọ bụla nwere ihe ya, ọ bụ ezie na o doro anya na ha anaghị agbanwe agbanwe. Ihe nke na adighi eme na ngwugwu ugwo ma ghara ikwusi na slack txz! XD
ezigbo ndu, ọ bụ isiokwu na-atọ ụtọ
Ọbụna ike gwụrụ Linux na ịnye ụdị azịza a dị egwu maka ndị ọrụ tozuru etozu. Kedu mgbe ụbọchị ga-abụ na ha ga-eweta ihe dị mfe maka ndị ọrụ novice? Ike gwụrụ m ịhụ ọtụtụ ihe nkwakọ ngwaahịa, njikwa, na ihe nzuzu na-enweghị isi na ihe niile ha na-eme bụ igbu oge na iwe iwe iweghara ndị ọrụ novice n'ime ụwa Linux. Anaghị m ekwu maka ihe ha na-eme ma ọ bụ ọganiihu ha rụgoro ugbu a adịghị mma, mana m na-akatọ ụzọ ha si eme ya, ọ bụ oge ime ihe dị mfe ma nye otu ngwugwu ntinye zuru ezu na enweghị eriri. nke njikọ internetntanetị iji nwee ike ịwụnye ihe zuru ezu. Ọ dị oke njọ na ụlọ ọrụ raara onwe ha nye mmepe nke sistemụ arụmọrụ Linux amatabeghị obere nkọwa a dị oke mkpa, nke ọ bụrụ na ha ejiri Windows na MacOS kpọrọ ezigbo ihe ...
Ezi ihe m hụrụ n'anya.
Lee ma ọ bụrụ na ọ na-eme m ka m lelee Fedora distro
Jizọs Israel Perales Martinez dijo
Naanị ihe dị m mkpa bụ nke ọrụ a enweghị rpm
Zaghachi Jesus Israel Perales Martinez
Na ọnụ ya: Finch, ahịa ngwa ngwa